Somaliland News : War-saxaafadeed - Xukunka abwaan Naciima Axmed Ibraahim
Somaliland Non State Actors Forum
Location: Jigjga-yar, Badda As, Behid WHO Office
Tel: +252-(0)-63-570536, +252-(0)-63-4414335
Xukunka abwaan Naciima Axmed Ibraahim
Ururada bulshada rayidka ah ee Somaliland waxaay maanta isugu yimaadeen shir ay kaga hadleen xukunka ciqaabta ah ee ku dhacay Naciima Axmed Ibraahim 15 April 2017 iyo cabashada la xidhiidha in loo gaystay waxyeelo jidheed intii ay xidhnayd. Maxkamadda waxa ay sheegtay inay ku heshay Niciima ceebayn iyo cay loo gaystay qaranka Somaliland oo ah qodobka 219 ee Xeerka Ciqaabta Guud.
Dhinaca kale, qareenada Niciima Axmed waxaay qoraal ku sheegeen in jidh-dil loo gaystay Niciima intii ay ku xidhnayd goob uu maamulo sirdoonka qaranku.
Hadaba ururada bulshada rayidka ahi waxaay ka walaacsan yihiin xadhiga iyo xukunka ku dhacay Niciima. Waxaay ugu baaqayaan dawladda Somaliland in baadhitaan madax-banaan lagu sameeyo tacadiyada iyo gabood falka la sheegay in Niciima loo gaystya intii ay xidhnayd.
Dastuurka Somaliland wuxuu damaanad qaaday xorriyada hadalka iyo cabirada aragtida oo sidoo kale uu ilaaliyay qaanuunka caalamiga ah ee xuquuqal insaanku. Wuxuu sidoo kale mamnuucay in wax jidh dil iyo dhibaato ah loo gaysto cid xidhan. Falalka caynkaas ah oo sidoo kale mamnuuc ay ka dhigeen xeerarka caalamiga ah ee xuquuqal insaanku.
Warqaddan waxaa saxeexay Ururada Bulshada Rayidka ah ee kala ah:
Somaliland Lawyer's Association
Durdur Research Group
Women Agenda Forum
Royal Institute for Research and Policy Studies